စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ | CUNMAC Vietnam
1. ဤဝဘ်ဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာအားလုံးသည် CUNMAC ၏ သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသည့် စာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗီဒီယိုနှင့် အသံတို့သည် CUNMAC မှ သက်ဆိုင်ပါသည်။ CUNMAC ၏ ကြိုတင်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဤဝဘ်ဆိုဒ်မှ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ကူးယူ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရပါ။ ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အခြားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နိုင်ပြီး ပြစ်မှု သို့မဟုတ် အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်ပါသည်။ CUNMAC သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ CUNMAC ၏ ကြိုတင်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို မည်သည့်ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
2. ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် စာစီစာရိုက်အမှားများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ပေးထားသော အချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ သက်ဆိုင်မှုရှိစေရန်အတွက် ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အပြောင်းအလဲများကို အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်ပါသည်။ CUNMAC သည် ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ရရှိနိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ CUNMAC သည် ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များ၏ ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု သို့မဟုတ် သင့်လျော်မှုတို့ကို အာမခံချက်မရှိပါ။
1. CUNMAC သည် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို Client ထံမှ အမှာစာများကို လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး လက်ခံသောအခါတွင် Client အား စာဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် Client သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အေးဂျင့်ဖြစ်မည်ဟု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ယုံကြည်သူ မည်သူမဆို Client ထံမှ အမှာစာများကို လက်ခံနိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုအတွက် Client မှ ကုမ္ပဏီသို့ မည်သည့်အမိန့်စာမဆို ကုမ္ပဏီမှ လက်ခံသည်အထိ ကုမ္ပဏီအား စည်းနှောင်မည်မဟုတ်ပါ။
2. CUNMAC မှပေးဆောင်သော မည်သည့်ကိုးကားသည်မဆို ကိုးကားသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း 30 ကာလအထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤကာလပြီးနောက်၊ ဤကိုးကားချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပျက်ပြယ်သွားပါသည်။ ကိုးကားချက်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ဖောက်သည်သည် ကိုးကားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီနှင့် မှာယူရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီ ကိုးကားချက်တွင်မဆို ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းသည် အဆိုပါကိုးကားချက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး အခြားကိစ္စများတွင် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကို မိတ်ဆက်ပေးရုံသာ ရောင်းချခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် မရှိပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်အတိုင်း ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
CUNMAC ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည် အာမခံကာလ 24 လအတွင်း အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ အာမခံကာလသည် ပေးပို့မှုအကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ပေးပို့သည့်နေ့မှ စတင်သည်။
စက်ပစ္စည်း သက်တမ်းတိုးခြင်း- CUNMAC မှ ပံ့ပိုးပေးသော ထုတ်ကုန်များတွင် စက်ပစ္စည်းအားလုံးသည် အထက်ဖော်ပြပါ အာမခံအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး CUNMAC ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခံရမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ထပ်မံမဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ CUNMAC မှ စက်ပစ္စည်းများကို သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှားအယွင်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာအားလုံးအတွက် အာမခံချက်တစ်ခု ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
အာမခံကုန်ပစ္စည်းများတွင် အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းများ၊ ထုတ်ကုန်တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့် CUNMAC မှ သင်ဝယ်ယူကြောင်း သက်သေပြသည့်ပြေစာပါရှိရပါမည်။
3. အမှုတွဲများသည် အာမခံဖြင့် အကျုံးမဝင်ပါ။
– ပစ္စည်းသည် အာမခံကာလမဟုတ်တော့ပါ။
– စက်ပေါ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းအမည်ကို မဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။
– စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှု၊ ကျဆင်းခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ရေပြန်ကျခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း။
– ထုတ်ကုန်သည် ကြွက် သို့မဟုတ် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကြောင့် ပျက်စီးသည့် လက္ခဏာများကို ပြသသည်။
– မှားယွင်းသော ဗို့အားစည်းမျဉ်းကို အသုံးပြု၍ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုပါ။
– အသုံးပြုသူများသည် အာမခံချက်တွင် စက်ယန္တရားများကို ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားပြီး ပြုပြင်ပေးသည်။
– စက်ကိရိယာများနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများသည် ခါးပတ်၊ ဂီယာကွင်းဆက်၊ ဆေးရောင်၊ အလှဆင်ပလပ်စတစ်အရောင် ကဲ့သို့သော လူသုံးကုန် ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
CUNMAC တွင် ဝယ်ယူသည့် စက်ပစ္စည်းအားလုံးသည် အာမခံကာလ ကုန်ဆုံးသွားသည် သို့မဟုတ် အာမခံမထားသော အခြေအနေတွင် ရှိနေသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် CUNMAC မှ ပြုပြင်ပြီး အစားထိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံတောင်းဆိုရန် ကုမ္ပဏီ၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
တယ်လီဖုန်း/ whatsapp : +84 981 402 902
ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို သဘောတူပြီး စာချုပ်တွင် ရှင်းလင်းထားပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုလုံးကို မူရင်းပက်ကေ့ချ်ကို ပို့ပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြန်ပေးသည့်မူဝါဒမရှိပေ။
ရောင်းချသူ၏ဝတ္တရားများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုစီတွင် ဝယ်ယူသူ၏ဝတ္တရားများ- စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသော
သင်အမှာစာကို အောင်မြင်စွာတင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် သင့်မှာယူမှုကို အတည်ပြုရန် သင်ပေးထားသော ဖုန်း/အီးမေးလ်နံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသည့်အချိန်နှင့် အခြားလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူ သင့်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
စိစစ်ခြင်းအောင်မြင်ပြီးနောက်၊ စာချုပ်ပါအတိုင်း သင့်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
– ဖောက်သည်မှ အမြန်လိုအပ်ပါက ပို့ဆောင်ခသည် သွားမည့်နေရာပေါ်မူတည်၍ ကွာခြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် နှောင့်နှေးပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများထံ စောစောစီးစီး အကြောင်းကြားပါမည်။